मुख्य खबर Archives - Page 142 of 366 - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
प्रचण्ड–ओलीको निर्देशन : कार्यदलले गर्यो यस्तो निर्णय
भक्तपुर, पुस २६ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा गठन र प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गठन गरेको कार्यदलले भोलिदेखि आफ्नो काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा आज एमाले अध्यक्ष ओली...
अनशनरत डा. केसीलाई वीर अस्पतालबाट अदालत लगियो
काठमाडौंँ- वीर अस्पतालमा प्रहरी नियन्त्रणमै अढनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको ‘अदालतको मानहानि मुद्दा’मा बुधबार बहस हुँदैछ। उनलाई साढे नाै बजे नै वीर अस्पतालबाट सर्वोच्च अदालत लगिएको छ। उनको पक्ष र विपक्षमा वकिलहरुले बहस गर्ने छन्। केसीका पक्षमा बहस गर्न सयभन्दा...
कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेको छैन : प्रदिप पौडेल
काठमाडौं, पुस २५ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता प्रदिप पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि कांग्रेसले प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् । शिखरन्यूजलाई दिएका अन्तवार्तामा पौडेलले ‘प्रचण्डलाई ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव’ नगरेको र मिडियामा आएको समाचारमा कुनै सत्यता...
गोविन्द केसीलाई वीर अस्पताल लगियो
काठमाडौँ, २५ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई वीर अस्पताल लगिएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि केसीलाई अस्पताल लगिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार केसीको बयान सकिए लगत्तै अनसनरत केसीलाई प्रहरीले उपचारको लागि अस्पताल लगिएको...
गोविन्द केसीको बयान बाहिरिएको भन्दै सर्वोच्चमा हंगामा
काठमाडौं, पुस २५ । अदालतको मानहनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको मुद्दाको बयान बाहिरिएको भन्दै सर्वोच्चमा हंगामा मच्चिएको छ । केसीको बयान चलिरहेका बेला विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लाईभ प्रसारण गरेको तथा बयानको हुबहु छापिएको भन्दै केसीको विपक्षमा बहस गर्ने...
« 1 … 141 142 143 … 366 »